Beesha Caalamka Oo ka Hadashay Muranka ka Taagan Shirka Farmaajo Iclaamiyay. – Heemaal News Network
War Saxaafadeed goordhaw kasoo baxay Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay shirka ay mar kale isugu imaanayaan 15-ka bishan DF iyo maamul goboleedyada dalka.
Beesha Caalamka qoraalka kasoo baxay ayaana looga digay in dib ku dhac ku yimaado shirkan iyada oo cudur daar laga dhigayo muaranka ka taagan goobta lagu qabanayo shirkan ay isugu imaanayaa madaxda Dowlada federaalka iyo kuwa mamaulada.
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya ayaa iclaamiyay in shirka wadatashiga lagu qabanayo magaalada Garawe halka maamulka Puntland sheegeen in aysan diyaar u aheyn marti galinta shirkaasi kuna baaqday in lagu qabto Muqdisho.
Shirka uu iclaamiyay Madaxweyne Farmaajo waxaa ka harsan labo maalin oo kaliya mana muuqato ififaalo uu shirkaasi ku qabsoomayo maadaama ana wali lagu heshiin goobta shirkaasi ka dhacayo.
Halkan ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Beesha Caalamka.
Saaxiibada caalamku ma aaminsana in su’aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanyo ay cudurdaar u noqoto dib-u-dhac kasta ee ku yimaada shir-madexeedkan muhiimka ah. Waxaan ku boorinaynaa madaxda Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada, iyagoo ku shaqaynaya ku wada shaqeenaya niyad wax lagu dhisayo, inay xalliyaan arrimaha yar ee ka harsan wadahadalladii Dhusamareeb isla markaana ay ku heshiiyaan jadwal doorasho oo gaaban kaas oo lagama maarmaan u ah hirgelinta Heshiiskii 17kii Sebtembar.
Xasan Sheekh Oo ka Hadlay Siyaasada Somaliland Eedeeyay-na Dawlada Farmaajo.